Chigadzirwa Zvidimbu |
LANTAISI TS30 inokurumidza isina waya mota charger inoenderana neese maQi-anogoneswa namano ayo akashongedzerwa neQi-inoenderana kavha.
、 、 Chitarisiko Kuongorora 1, Pamberi pebhokisi Iyo isina chinhu uye yakapusa kumberi bhokisi, inogona kugadzirirwa vatengi veOEM. 2, Back rebhokisi Kumashure kwebhokisi kunoratidzira sumo dzakakodzera uye zvirevo. Inzwa Zvinotaurwa: DC 5V-2A, DC 9V-1.67A Kubuditsa: 10W Max. Size: 116 * 96 * 90mm Ruvara: □ Nhema □ Zvimwe 3 3 Vhura bhokisi Op ...
15W isina waya inomhanya mota charger kuongorora
Mazuva ano, mafoni mazhinji anowedzera kutsigira tekinoroji isina waya, basa iri rekuchaja zvisina waya rinounza ruzivo rwekuchaja nekukurumidza uye nyore kune vashandisi. Kuti uite waya yekuchaja isina waya iwedzere simba, vagadziri vari kushandawo nesimba pane isina waya yekuchaja mar ...
Mazuva ano, nharembozha dzinowanda dzinotsigira iyo inotonhorera techs isina waya yekuchaja basa, iyo inounza vashandisi mukana uri nyore uye nekukurumidza kuchaja chiitiko. Kuti ugadzire isina waya yekuchaja mashandiro enharembozha zvine simba, vagadziri vanewo bheji pamusika wekuchaja usina waya, kutanga ...